Jamaica inogamuchira 1 mamirioni mushanyi kubvira kutanga kweCOPVID-19 denda
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Jamaica inogamuchira 1 mamirioni mushanyi kubvira kutanga kweCOPVID-19 denda
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Caribbean • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Daynel Williams (kuruboshwe), nemwana wake ari muruoko, achiratidza kushinga sezvo Gurukota rezveKushanya, Hon Edmund Bartlett (3rd Kurudyi) achimuudza kuti ndiye muenzi weJamaica miriyoni yekumira kubva pakatanga denda re COVID-19. Zvakare, kugovana munguva, panguva yekugamuchirwa kwakanaka paSangster International Airport kutara chiitiko chakakomba zuro (Nyamavhuvhu 15), vari (LR) Chief Executive Officer weMBJ Ndege, Shane Munroe; Regional Director veVatengesi, Blue Diamond Resorts International, Kerry-Ann Quallo Casserly uye Jamaica Hotel uye Yevashanyi Association Mutungamiri, Clifton Reader.
Chakanga chiri kushamisika kwekuchema kune mumwe mutyairi weJetBlue nemhuri yake sezvo indasitiri yekushanya yeJamaica yakaratidza chiitiko chakakosha chekugamuchira miriyoni imwe yekumira kwevashanyi mumwedzi gumi nematanhatu chete, pakati pehosha.
Mutakuri wemiriyoni imwe kuti asvike muJamaica pakati pe COVID-19 akadururwa nezvipo paakasvika.
Pakati pezvipo zvekugashira paive nevhoketi, rinoshanda kwegore rimwe chete, zvichipa mhuri yese kumazuva mana-husiku hutatu-husiku ese anosanganisira zororo kuRoyalton.
Muchikamu chekupedzisira, kushanya muJamaica kwakawedzera ne5,000% muvanosvika.
Daynel Williams, achiperekedzwa nenhengo ina dzemhuri, akaburitsa mufaro wakawanda paakaburitswa mumutsara wevasvika paJetBlue kubva kuNew York nezuro (Nyamavhuvhu 15), kuzosangana nechikwata chevakuru, vachitungamirwa negurukota rezveKushanya, Hon. Edmund Bartlett. Akageredzwa nezvipo uye makorokoto emwoyo wese nekuve iye mushanyi wemiriyoni kubva Jamaica yakavhurwazve miganho yayo kuenda kune dzimwe nyika kufamba nendege musi wa 15 Chikumi 2020. Miganhu yese yakavharwa muna Kurume 2020, ichibvisa vese vaisvika apo denda re coronavirus, COVID-19, rakatanga kutora huturu.
Vakakundira mwana mumaoko uye mucheche akabatirira padhirezi rake, Mai Williams vakapererwa nekutaura asi vakakwanisa kudzokorora "Ah Mwari!" paakaedza kuburitsa mufaro wake sezvo Gurukota Bartlett vakamuudza kuti semuenzi wekumira kwemamirioni, iye zvino aive ari muzinda wekunzwa kwese, achitarisana nevamiriri venhau vanoverengeka vachikwikwidza kuti vaswedere pedyo naye nemhuri yake.
Vamwene vake, Jennifer Williams, wekuJamaican anobva kuOracabessa, St Mary, akazadzwa nemufaro paakakwidziridzwa kuchema. “Ndanga ndichifamba ndichidzokera nekuJamaica kweanopfuura makore makumi matatu ikozvino uye izvi hazvina kumboitika; Ndiri kufara, ndinonzwa kuda kuchema. ” Akatendera misodzi mishoma yemufaro kuyerera uku achiwedzera, “Ndafara, ndafara kwazvo. Handigoni kutaura manzwiro andinoita. ”
Pakati pezvipo zvekugashira paive nevhoketi, rinoshanda kwegore rimwe chete, zvichipa mhuri yese kumazuva mana-husiku hutatu-husiku ese anosanganisira zororo kuRoyalton, yakapihwa naRegional Director weZvatengesi weBlue Diamond Resorts International, Kerry-Ann Quallo Casserly.
Vachitaura nezvekukosha kwechiitiko ichi, Gurukota Bartlett vakati: "Ichi ndicho chiitiko chakakosha munhoroondo dzekushanya, zvisati zvamboitika, mukati megore nemwedzi mumwe chete takambova nemiriyoni imwe chete yekumira kwevashanyi vachiuya munyika medu." COVID-19 isati yatora zvakatora Jamaica padyo nemakore makumi maviri kuti inyore mamirioni avo ekutanga vanosvika mugore. Zvisinei, kusvika muna 20, nguva pfupi denda risati rasvika, kumira uye vafambi vasvika pamwe chete, vakapfuura mamirioni mana.
Kubva kuvhurwa kwemiganhu musi wa15 Chikumi, gore rapfuura, kushanya kwakawana madhora US $ 1.5 bhiriyoni uye vangodarika zviuru makumi mashanu pavashandi zana nemakumi matatu vakadzingwa basa, vadzoka pabasa. Sangster International Airport chete yakaverengera zviuru zvishanu zvemabasa ayo zviuru zvinomwe zvichidzorerwa.
VaBartlett vakati mukota yekupedzisira, "kushanya kwakawedzera ne5,000 muzana muvanosvika" uye mihoro yakawedzerawo zvakanyanya, "saka hatina chokwadi nezve kukanganisa kwekushanya kuJamaicachirongwa chekuvandudza hupfumi. ”
Pakati pemutambo wekutambira pamwe naMinster Bartlett naMai Casserly, vaive Director we Tourism, Donovan White; Jamaica Hotel uye Yevashanyi Association Mutungamiri, Clifton Reader; Chief Executive Officer (CEO) weMBJ Ndege, Shane Munroe uye Mutungamiriri uye CEO weAirports Authority yeJamaica, Audley Deidrick.